कंगनाको सफलतामा बलिउड जल्छ त्यसैले उनलाई कसैले साथ दिदैनन् ! - Sadrishya
कंगनाको सफलतामा बलिउड जल्छ त्यसैले उनलाई कसैले साथ दिदैनन् !
अभिनेत्री कंगना रनावतको फिल्म ‘मणिकर्णिका’को विवाद र निर्देशक क्रिससँग उनको शीतयुद्ध चलिरहेको छ ।
कंगना रनातले उनको फिल्म ‘मणिकर्णिका’ रिलिजपछि बलिउड कलाकारले उनको समर्थन नगरेको भन्दै आरोप लगाइन् । अहिले कंगनाको समर्थन गर्दै अनुपम खेर र तनुश्री दत्ता अघि सरेका छन् । तनुश्री दत्ताले कंगनाको पक्षमा बोल्दै भनिन् कंगनाको पक्षमा कोही पनि बोलेनन् किनकी उनको सफलतामा मानिसहरु जल्ने गर्छन् ।